Fedora 27 Yekugadza Nongedzo yeNewbies, Nhanho nedanho | Linux Vakapindwa muropa
Mune izvi shanduro nyowani yeFedora 27 chii chine yakaburitswa mavhiki mashoma apfuura, isu tinokupa iwe chii chiri chekuisa gwaro kune avo vanhu vatsva kuhurongwa pamwe nekugovera.
Fedora 27 inouya nechisarudzo chekuvandudza ruzivo rwevashandisi kuburikidza nehurongwa hwe dhizaini, iine kusimudzira kusimudzira uye pamusoro pezvese nekuenderana kwakanakisa uye mashandiro, pasina kumwe kunonoka ini ndinokusiira iwe neino diki dhairekitori iyo ini ndinovimba ichakubatsira iwe.
Como chekutanga chinodiwa kurodha pasi iyo ISO yeiyo system yekugadzirira nharaunda yedu, zvakare zvakakosha zvakanyanya kuti uzive kana isu zvakare tine zvishoma zvinodiwa kuti tikwanise kuisa iyo system uye tisina matambudziko ekushanda.
Kuti udzivirire iyo ISO tinozviita kubva kune yayo yepamutemo saiti iyo iwe yaunogona kuwana mukati iyi link
2.1 Fedora 27 USB Kuisa Midhiya
3 Nhanho-nhanho kumisikidzwa kweFedora 27
3.1 Gadza kumisikidza uye system mutauro.
3.2 Sarudza system system.
3.3 Kugadzira midzi mushandisi uye password muFedora 27
Kuisa Fedora 27 isu tinofanirwa kuve nezvinenge zvinotevera zvinodiwa:
1 GHz kana yepamusoro processor.
1 GB ye RAM.
VGA inoenderana giraidhi kadhi.
10 Gb ye hard disk.
Windows: Tinogona kuipisa ISO neImgburn, UltraISO, Nero kana chero chirongwa chero vasina ivo muWindows 7 uye gare gare inotipa mukana wekukiya kurudyi pane iyo ISO.
Linux: Iwe unogona kushandisa chero CD chifananidzo manejimendi manejimendi, kunyanya iyo inouya nemifananidzo yakajeka, pakati payo pane, Brasero, k3b, uye Xfburn.
Fedora 27 USB Kuisa Midhiya
Windows: Unogona kushandisa Universal USB Installer kana LinuxLive USB Musiki, zvese zviri nyore kushandisa. Kunyangwe paine zvakare chishandiso icho icho Fedora timu inotipa isu zvakananga, inonzi Fedora Media Munyori kubva kuRed Hat peji uko inotsanangura mashandiro ayo.
Linux: Iyo yakakurudzirwa sarudzo ndeye kushandisa iyo dd raira.
Nhanho-nhanho kumisikidzwa kweFedora 27
Tisati tatanga nebhoti repakati patakanyora Fedora ISO, tinofanirwa kumisikidza komputa yedu kuti itange nepakati, kuwedzera pane izvozvo kana iine UEFI unofanira kuimisa, kune avo vasingazive kuti UEFI chii, ivo unogona kutarisa zvishoma mu network.
Kana iyo svikiro yatanga, isu tinofanirwa kusarudza yekutanga sarudzo pane iyo runyorwa, kuti itange kutakura zvese zvinodikanwa kuti tikwanise kutanga kuisirwa pakombuta yedu.
Tiri mukati, skrini yakafanana neiya ini yandinoratidza ichaonekwa, patinozoona chiratidzo chimwe chete pakombuta, isu tinongofanirwa tinya kaviri pairi kutanga simaki mubatsiri.
Gadza kumisikidza uye system mutauro.
Kana izvi zvangoitwa, hwindo iri rinozovhurwa, apo chikamu chekutanga chekugadzirisa chinenge chiri chekusarudza mutauro watinozoshanda nawo neiyo yekumisikidza uye neayo iyo system yedu ichave yaiswa, nekuti izvi isu tinongofanirwa tsvaga yedu yekumisikidza mutauro mukati mechinyorwa chinotiratidza.
Kana mutauro uchinge wasarudzwa, ikozvino tinobaya bhatani re "Enderera" uye tichaona rinotevera hwindo
Sarudza system system.
Nhanho inotevera ichave yekusarudza nzvimbo yekumisikidzwa kwesisitimu, kana urikushandisa imwe sisitimu uye usina pfungwa panguva ino yezvaunofanira kuita, ini ndinokurudzira kuti iwe zvirinani zviite izvi mumuchina chaiwo uye nekudaro usarasikirwa nedhata rakakosha.
Zvino kana iwe uchiziva izvi, zvakafanira kuti pano iwe uve nepfungwa yezvaunofanira kuita sezvo imwe neimwe nyaya yakasiyana.
1.- Sarudza hard drive uye iwe sarudza otomatiki sarudzo izvi zvinobvumidza Fedora kutarisira chikamu chemaneja uye otomatiki kuita rese rakaomarara dhiraidhi kupatsanura
Izvi zvinosanganisira kurasikirwa neese data aripo pane diski yesarudzo yako sezvo ichizo fomatiwa.
2.- Sarudza hard drive uye mutsikaHeino iwe ndiwe unotora kutonga kwekuti Fedora 26 ichaiswa sei pakombuta yako, kune izvi iwe unofanirwa kuziva nezve diski kupatsanura uye mhando dzezvikamu uye matafura.
Kana iko kumisikidza kwaitwa pane rako rakaomarara dhiraivhu kana zvikamu, tinoenderera kunhanho yekupedzisira, inova yekugadzirisa mushandisi wauchashanda naye mukati meiyo system.
Kugadzira midzi mushandisi uye password muFedora 27
Chinhu chekupedzisira chichava kupa password kumudzidzi uye account yemushandisi, iro chete zano randichakupa nderekuti mushandisi uye password password yaunosarudza zvakasiyana uye zvaunogona kurangarira.
Iwe unongofanirwa kumirira kuiswa kwepakeji kuti upedze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Fedora 27 Yekugadza Gwaro reNewbies, Nhanho nedanho